Ndụmọdụ: Otu esi eme Xfce ka ọ dị ka KDE | Site na Linux
Ndụmọdụ: Otu esi eme Xfce ka ọ dị ka KDE
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux, Na-atụ aro, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ndi anyi ji Xfce anyị nwere ike inwe ọdịdị nke KDE (ikuku oxygen) n'ụzọ dị mfe, dịka anyị pụrụ ịhụ na foto na-esonụ:
Iji mezuo nke a, anyị ga - ebudata faịlụ ndị a:
Maka windo (xfwm): Faịlụ a. Anyị na-edozi ya ma tinye ya n'ime folda ahụ ~ / .mgbe o / usr / share / gburugburu.
Maka isiokwu Gtk: Faịlụ a. Anaghị m echeta ebe m si budata ya, anyị wepụrụ ya ma tinye ya n’ime folda ahụ~ / .mgbe o / usr / share / gburugburu.
Maka akara ngosi: Njikọ a o nke ọzọ. Anyị na-edozi ya ma tinye ya n'ime folda ahụ~ / .icons o / usr / share / akara ngosi.
Na Debian anyị nwere ike itinye akara ngosi KDE na cursors site na ịwụnye nchịkọta ndị a:
Ugbu a, anyị họrọ isiokwu na akara ngosi dị na NchNhr »Ntọala» Ọdịdị:
Na na NchNhr »Ntọala» Window Manager:
Njikere, na na anyị nwere ike inwe ihe ọ na-ewe maka anyị Xfce yiri KDE. M hapụrụ nseta ihuenyo nke desktọọpụ m:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Ndụmọdụ: Otu esi eme Xfce ka ọ dị ka KDE
Ezigbo mma ... M ga-enye Xfce ohere.
Ebe ọ bụ na Gnome 3 pụtara, akwagara m KDE, mana ọ dị mma ịnwale ihe ndị ọzọ.
Zaghachi ka roman77
24 awa gara aga enwere m KDE, ma ugbu a, m na-eji Xfce (ọ bụ ezie na ejiri m Gnome-Shell). N'ezie, atụla anya ịchọta ihe niile ị nwere na KDE ..
Arịrịọ na-atọ ụtọ! Daalụ ọzọ… +1 maka post. Banyere!
Obi dị m ụtọ na ọ rụọla ọrụ gị .. m hụrụ n'anya na-amasị lol
Ọ dị ezigbo mma, ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbasa nwụnye na LXDE ma ọ bụ Gnome ọ ga-adị mma.
Na LXDE ihe ekwesịghị ịdị iche. Nke ahụ bụ, otu isiokwu Gtk kwesịrị ịrụ ọrụ, naanị ị ga-achọ isiokwu maka Window Manager (openbox). Aga m ahụ ma m ga-ahụ ihe ọ bụla gbasara ya.
Kpọmkwem, o kwesịghị ịkpata nnukwu nsogbu, n'eziokwu mgbe ahụ isiokwu maka igbe mbata, ha adịchaghị njọ na m nwere, enwere ụfọdụ ọmarịcha mma, ma nwee obi ụtọ na-adịghị enwe anyaụfụ ihe ọ bụla nye ndị kde, na gnome, n'ezie ha enweghị ọtụtụ mmetụta, mana ha mara mma.
Kpọmkwem ... M ji Openbox ruo ogologo oge na m hụrụ ya n'anya ...
Ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya, echere m banyere ịnwale Lubuntu n'ihi na anụbeghị m karịa ka o si arụ ọrụ na PC dị mma, mana ọ bụ windo windo Openbox na-akwụsị m.
Achọghị m ị imomi ma nke a na-adọrọ adọrọ
Na na ị na-eche? N'elu:
Rie karia LXDE ka m ghotara
Ugbu a na Chromium + Pidgin + Slypheed + Terminal = 202Mb / 1024Mb…
Gịnị banyere nke ahụ?
Ana m ewere XFCE oge niile, ugbu a ana m anwale Gnome Shell, anaghị m amasị ya, mana… ọ gaghị hazie ihe ọ bụla mana achọrọ m ịnwale ya nwa oge, n'aka nke ọzọ, Achọrọ m gbalịa XFCE nwaa, ị nwere onye nkuzi ga ahazi ya? Kedu otu Chromium si aru oru?
Ọ bụ eziokwu na Xfce na ndabara na-adịtụ njọ, mana ahaziri nke ọma bụ ịma mma. Na mgbakwunye, o nwere Window Composer na anyị nwere ike igwu egwu na mmetụta nghọta na-eme ka ọ maa mma n'ezie. Aga m ahụ ma m mee nkuzi banyere etu esi ahazi ya nke ọma. Na Chromium, emeela m nke ọma karịa Firefox / Iceweasel 7 na 8. Karịsịa ụdị nke a kachasị ọhụrụ na -emepụta na oriri ... 🙁
Daalụ nke ọma, ebudatara m Debian LCDE + XFCE, ule, n'ezie, m ga-echere nkuzi ahụ.
Taa, enwerem ụbọchị siri ike, mana m nwere olile anya na m nwere oge iji mee ihe 😀
Magburu onwe ya, ọ masịrị m! Ekele 😀
Daalụ nke ukwuu 😀
G ABN AB ABSURDOOOOO, oburu na m nwere XFCE, gini kpatara m ji cho kde ??? M wụnye distro na kde. Ọ ga-abụ na ọ nweghị ihe ọ bụla biputere hahahahaha
Maka otu ihe kpatara ọtụtụ ndị ọrụ, ma ha bụ Xfce, Gnome ma ọ bụ KDE, nwere ụdị ọdịdị dị na OS X ma ọ bụ Windows.
Chaị! na-akpali mmasị… M n'ezie na-amasị XFCE, ọ bụ ihe ihere na m otu anaghị aga nnọọ…. ezigbo…. agile. Thunar na-eme m ihe dị ịtụnanya dịka mgbe ị na-adọkpụ faịlụ site na windo ọ bụla na desktọọpụ, nke gosipụtara gị akara ngosi "+" dị ka mgbe ị ga-idetuo na mado, mana mgbe ahụ ihe ọ na-eme na-ebipụ na mado wepụ faịlụ ahụ si nchekwa ya.
Ihe ọzọ na-enye m nsogbu bụ oge ị na-eche oge ụfọdụ iji gosi gị menu na mmemme ahụ, naanị oge ọ na-ewe iji gosipụta menu ndọpụta mgbe ị pịa bọtịnụ aka nri na ihe ọ bụla ...
Ke ofụri ofụri, M n'ezie na-amasị XFCE nkà ihe ọmụma nke minimalist, ọtọ na imewe ... ma m na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na m hụrụ ndị a "flaws".
Site n'ụzọ m jiri Xubuntu 12.04 (na mba, anaghị m emelite ugbu a na ọ were m ogologo oge iji hazie ya ma hapụ ya ka m masịrị ... Echere m na m ga-echere afọ ole na ole ọzọ maka ya na-egbu maramara a bit ọzọ). Daalụ maka nnukwu ọrụ gị!
Nwa ya dijo
N'oge m na-eji GNOME 3.2 enyebeghị m ọtụtụ nsogbu, mana tupu ọ bụrụ na ejirila m XCFE 4.10 na LXDE. Enwere m mmasị na ịnwale LXQT mana ọ ga-abụ mgbe e mesịrị.
Daalụ sooooooo nke ukwuu !!!
Etu ị ga-esi wepu desktọọpụ gị na GIF
LibreOffice 3.4.4 dị